MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward New Hti Pauk Lucky Draw MM - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
MPTရဲ့ နယူးထိပေါက် Lucky Draw
MPTရဲ့ နယူးထိပေါက်ဆိုတာ MPT4Uထဲဝင်ပြီး ငွေဖြည့်သွင်း၍ဖြစ်စေ၊ ပတ်ကေ့ချ်များဝယ်ယူ၍ဖြစ်စေ အထူးဆုများ၊အပတ်စဉ်ဆုများနဲ့ နေ့စဉ် Data ဆုမဲများစွာကိုကံစမ်းရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။ဒါ့ကြောင့်အခုပဲကံစမ်းလိုက်ကြပါစို့!!!!!
I Phone X 256GB ဆက်သွယ်ဆဲ 09405186xxx
Samsung Galaxy S10+ ဦးသုလက္ခဏ 09263676xxx ဟိုပုံးမြို့နယ် ၊ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်)
1 Tical Gold Coin မယုခက်ဖြိုး 09891385xxx ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် ၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး Samsung Galaxy A80 Phone ကိုချစ်မင်းသူ 09422520xxx အိမ်မဲမြို့နယ်၊ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
1 tical Gold Coins မောင်ရန်မျိုးနိုင် 09423750xxx လှိုင်သာယာမြို့နယ် ၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Samsung Galaxy A80 Phone မသင်းသင်းလှိုင် 09402041xxx သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
1 tical Gold Coins ကိုဟိန်းဇော်ဌေး 09448682xxx ဘုတလင်မြို့နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး Samsung Galaxy A80 Phone မနန်းဘိုးဖွဲ 09459152xxx မိုင်းယောင်းမြို့နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်(ရှေ့)
1 tical Gold Coins ကိုအောင်အောင်ဦး 09269791xxx ဖျာပုံမြို့နယ် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး Samsung Galaxy A80 Phone မပြည့်ရတီဖူး 09266398xxx ချောင်းဆုံမြို့နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်
1 tical Gold Coins မဝင်းဝင်းအိ 09400430xxx ကောလင်းမြို့နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး Samsung Galaxy A80 Phone ကိုစည်သူရဲရင့် 09261149xxx မှော်ဘီမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
1 tical Gold Coins မနန်းရွှေဝါ 09444173xxx ညောင်ရွှေမြို့နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်) Samsung Galaxy A80 Phone ကိုသက်ထွန်းဇော် 09453323xxx ရေနံချောင်းမြို့နယ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
1 tical Gold Coins ကိုပြည့်စုံဦး 09423749xxx တောင်ကြီးမြို့နယ် ၊ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်) Samsung Galaxy A80 Phone ကိုအောင်ဇင်ဦး 09422919xxx သာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၁။ “နယူးထိပေါက်” ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်ဆိုတာဘာလဲ?
“နယူးထိပေါက်” ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်ဆိုတာ MPT မှ MPT4U app အသုံးပြုပြီး ပက်ကေ့ချ် ၀ယ်ယူသုံးစွဲသူတိုင်းအတွက် ကျေးဇူးတုံ့ပြန်တဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုပါ။ MPT4U app ထဲတွင် ကြိုက်နှစ်သက်ရာ မည်သည့်ပက်ကေ့ချ် ကို မဆို အနည်းဆုံးတစ်ခါဝယ်ယူတိုင်း “နယူးထိပေါက်” ဂိမ်းထဲ၌ ကံစမ်းရန် အခွင့်အရေး(၁)ကြိမ် ရရှိဆော့ကစားနိုင်ပြီး 200 GB Data နှင့် 20 GB Data ဆုကြီးပေါင်း ၂၀၀၀ အပါအဝင် အခြား Data GB ဆုပေါင်းများစွာကိုလည်း ကံစမ်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါသည်။
ထို့အပြင် MPT4U မှတဆင့် ၁၀၀၀ ကျပ်နှင့် အထက် ဖုန်းငွေဖြည့်တိုင်းလည်း “ဆုတွေထူးရှယ် ၂၀၂၀ ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်”မှာ ပါဝင်ကံစမ်းခွင့်များ ရရှိနိုင်ပါသည်။ MPT4U website (https://my.mpt.com.mm/#/) မှတစ်ဆင့်လည်း MPT ကွန်ယက်ဖြင့် ဒေတာအခမဲ့ ကံစမ်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
၂။ MPT4U application မှ တစ်နေ့တည်းတွင် ပက်ကေ့ချ် ၃ခုဝယ်ယူထားပါတယ်။ ကံစမ်းခွင့် ဘယ်လောက်ရရှိမှာလဲ?
MPT4U app ထဲတွင် ကြိုက်နှစ်သက်ရာ မည်သည့်ပက်ကေ့ချ်မဆို အနည်းဆုံးတစ်ခါဝယ်ယူတိုင်း နယူးထိပေါက်ဂိမ်းထဲ၌ ကံစမ်းရန် အခွင့်အရေး(၁)ကြိမ်ရရှိပါမည်။ ပက်ကေ့ခ်ျ ၃ ခုဝယ်ယူထားပါက ကံစမ်းခွင့် ၃ ကြိမ် ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
ကံစမ်းခွင့်ရတဲ့နေ့ ရဲ့ ၀၀:၀၀:၀၀ နာရီတွင် သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည်ဖြစ်ပြီး နောက်နေ့သို့ သယ်ဆောင်အသုံးပြု၍ မရနိုင်ပါ။ ပက်ကေ့ချ်တစ်ခုထက်ပို၍ ဝယ်ယူထားပြီး ကံစမ်းခွင့်များကို အသုံးပြုရန် ကျန်ရှိနေပါက သက်တမ်းမကုန်ဆုံးခင် (၁)နာရီ ကြိုတင်၍ (၂၃:၀၀:၀၀ နာရီတွင်) သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးစာရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
၄။ MPT4U Appကိုဘယ်လိုရယူနိုင်ပါသလဲ?
MPT4U Appကို Google Play Store မှသော်လည်းကောင်း၊ App Storeမှသော်လည်းကောင်း ဒေါင်းလုတ်ဆွဲ၍ရယူနိင်သလို လိုတရဝက်ဆိုက်ဒ်မှ အခမဲ့ဒေါင်းလုတ်ရယူ၍ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။